UMabena uzovela enkantolo ngecala lokushaya umyeni
OWAYENGUMLINGISI weSibaya uZinhle Mabena obhekene necala lokushaya nokulimaza umyeni wakhe Isithombe: SIGCINIWE
Thokozani Ndlovu | May 3, 2021
UBUYELA enkantolo ngoJulayi 1, owayengumlingisi weSibaya, uZinhle Mabhena, obhekene necala lokushaya umyeni wakhe ongusomabhizinisi, uRobert Ngwenya.
Isolezwe ngeSonto lithole ukuthi uZinhle ubevele enkantolo yesifunda ePitoli ngeledlule, ngemizamo yokuvimba ukuthi angashushiswa ngaleli cala. Kuthiwa ubhekene necala lokushaya umyeni wakhe, waphinde wamphushela ezitebhisini walimala ngenkathi besemzini wabo eWaterfall, eMidrand.
Ummeli kaZinhle, uJoshua Lazarus Shapiro, ukuqinisekisile ukuthi lo mlingisi ubuyela enkantolo ngecala lokushaya.
“ NgoJulayi 1, sizobe siyokuzwa ukuthi uZinhle uyashushiswa yini ngaleli cala. Idokodo likumshushisi omkhulu okunguyena ozothatha isinqumo ngokushushiswa kwakhe. Okwamanje ngeke ngikuqinisekise ukushushiswa kwakhe kuze kube sizwa isinqumo ngoJulayi,” kusho ummeli uShapiro.
Uthe noma engeke akuqinisekise ukushushiswa kukaZinhle kodwa maningi amathuba okuthi ashushiswe, konke sekulele esinqumweni somshushisi omkhulu ukuthi sithini.
Kuthintwa uNgwenya ngalolu daba, uthe usekhathele abezindaba bembuza ngalo, ucela ukungaphawuli. Ummeli kaNgwenya, uShani Adams Roberts, naye uthe ngeke akwazi ukuphawula ngecala ngoba akayena ummeli wakhe kulona. Uthe yena ummele kwelinye icalam hhayi elokushaywa.
UZinhle usolwa ngokuthi waxabana nomyeni wakhe uNgwenya ongusomabhizinisi baze bashayana. Kuthiwa ngesikhathi belwa, lo mlingisi waphushela uNgwenya ezitebhisini emzini wabo oyisitezi eWaterfall, lapho uNgwenya okuthiwa walimala khona kakhulu. Kuleli cala kuthiwa kunofakazi ababona ngesikhathi uNgwenya ephushelwa ezitebhisini elimala kanzima, nokwaphetha ngokuthi ayovula icala emaphoyiseni.